औद्योगिक प्रकाशमा एलईडी किन छिटो लोकप्रिय हुन सकिन्छ? - रीटा
औद्योगिक प्रकाशमा एलईडी किन छिटो लोकप्रिय हुन सकिन्छ?
एलईडी अब विश्वव्यापी रूपमा छिन, साना रसोईघर र बाथरूमबाट ठूला गगनचुम्बी भवनहरू र शहर सडकहरूमा।
औद्योगिक प्रकाशको लागि LEDs को उदाहरण के हो?
औद्योगिक सुविधाहरूमा विस्तृत प्रकारका अनुप्रयोगहरू छन् जुन विशेष ठाउँको आवश्यकताको आधारमा फरक प्रकाश मानकहरू आवश्यक पर्दछ।
â – example उदाहरणका लागि गोदामहरू र वितरण केन्द्रहरूमा। यी ठाउँहरूलाई उच्च अल्ट्राको aisles मा राम्रो ठाडो मोमबत्तीको बखत प्रदान गर्ने क्रममा साझा ठूलो क्षेत्र लाई समान रूपमा उज्यालो पार्न विभिन्न प्रकारका प्रकाश वितरण फिक्स्चरको आवश्यक पर्दछ।
â – ² उदाहरण को लागी एक निर्माण प्लान्ट मा। यी ठाउँहरूलाई दृश्यता र सुरक्षा सुधार गर्न, र मर्मत कार्यलाई न्यूनतम गर्नको लागि सटीक अप्टिकल नियन्त्रणहरूको आवश्यक पर्दछ। उही समयमा, निर्माण बोटहरूलाई अधिक जटिल र कठोर वातावरणहरूको सामना गर्न टिकाऊ बत्तीहरू पनि चाहिन्छ।
â – food उदाहरणका लागि खाद्य प्रशोधन र चिसो भण्डारण कोठा। यी ठाउँहरू कडा नियमन आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ। Luminaires वायुरोधी, नमी प्रतिरोधी हुनुपर्छ, र अधिकतम प्रकाश आउटपुट प्रदान गर्नुहोस्।
एलईडी बत्तीहरूले यी मापदण्डहरू पूरा गर्न सक्दछ, उच्च गुणस्तरको प्रकाश र उच्च सौंदर्यशास्त्र प्रदान गर्दछ, परम्परागत उच्च-आउटपुट बत्तीहरूको बेफाइदाबिना।
औद्योगिक प्रकाशको लागि एलईडी को मुख्य फाइदाहरू के हुन्?
१. ऊर्जा लागत घटाउनुहोस्। HID बत्ती र फ्लोरोसेंट बत्तीहरूसँग तुलना गरेर, LEDs कम उर्जा खपत गर्दछ। धेरै जसो औद्योगिक सुविधाहरूसँग ठूला ठाउँहरू र उच्च सीमाहरू छन्, जबकि अघिल्लो प्रविधिहरूमा उच्च लुमेन उत्पादन आवश्यक पर्ने उच्च वाट्सहरू आवश्यक पर्दछ। तर आज, उच्च दक्षता एलईडी समाधानले परम्परागत प्रकाशको आधा भन्दा कम ऊर्जाको लागि आवश्यक प्रकाश आउटपुट प्रदान गर्न सक्दछ।
२. मर्मत लागत घटाउनुहोस्। LEDs ले परम्परागत प्रकाश भन्दा चार गुणा बढी जीवन प्रदान गर्न सक्छ, र लुमेन मर्मत पनि सुधार गरिएको छ। यसले प्रतिस्थापन बत्तीहरूका लागि सम्बन्धित रखरखाव लागतहरूलाई कम गर्दछ र सुरक्षित, उज्यालो वातावरण सिर्जना गर्दछ।
Control. नियन्त्रणयोग्य प्रकाश। HID र अन्य प्रविधिहरू भन्दा फरक, LEDs स्वाभाविक रूपमा नियन्त्रणको साथ उपयुक्त छ र डेलाइट कन्डिसन नियन्त्रणको माध्यमबाट अधिक ऊर्जा बचत प्राप्त गर्दछ।
कारखानाको प्रकाशले एलईडी प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु अघि कुन कारकहरू विचार गर्न आवश्यक छ?
१. वर्तमान प्रकाश उपकरणको उपस्थिति र लुमेन आउटपुट जाँच गर्नुहोस्। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, एलईडी फिक्स्चर स्थापना गर्दा जुन अघिल्लो फिक्स्चरको समान छ स्थापना समय छोटो हुनेछ र लगानीमा फिर्ताको चाँडो गर्नेछ।
२. लुमेनको संख्या कम मान्नु पर्दछ। परम्परागत टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर बत्तीहरूसँग तुलना गर्दा, एलईडी बत्तीहरूको अप्टिकल प्रदर्शन बढ्न थाल्छ। केहि अनुप्रयोगहरूमा, केहि फिक्स्चरलाई चाहिएको प्रकाश स्तर प्राप्त गर्न अवस्थित फिक्स्चरहरू भन्दा कम लुमेन आवश्यक हुन्छ।
The. नियमहरु बुझ्नुहोस्। जब परम्परागत फिक्स्चर प्रतिस्थापन, स्थानीय नियमहरु ऊर्जा संरक्षण र बृद्धि प्रकाश नियन्त्रण आवाश्यक हुन सक्छ। थप रूपमा, धेरै स्थानहरूले केही प्रारम्भिक लागतहरूको अफसेट गर्न प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ।
निचिया र ओएसआरएएमले बौद्धिक सम्पत्ति सहयोगको विस्तारको घोषणा गर्‍यो
जापानी कम्पनीहरूले चीनमा एलईडी खेती टेक्नोलोजी प्रवर्धन गर्न चिनियाँ उद्यमहरूसँग हात मिलाए